Semalt: Botnet Kudzivirira Tips. Nzira Yokuramba Yakachengeteka Sei?
rootkit chikamu chepurogiramu yakavanzwa uye yakagadzirwa pamakombiyuta kana foni pasina ruzivo rwako. Zvinogona kuuraya nhamba huru yemapurogiramu uye mafaira uye inowanzogadziriswa nevanorwisa. Vanoshandisa zvakanakira kushaya simba kwekombiyuta yenyu uye vanoita kuti iwe uchengetedze zvirongwa zvisingaiti uye zvishandiso - wifi сделать антенну.
Unonzi Abgarian, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , anovimbisa kuti rootkits haisi nengozi nguva dzose asi inogona kuvanza mabasa ose akaipa, saka iwe unofanira kuzvibvisa nokukurumidza. Dzimwe nguva vanotambudza vanowana ruzivo rwenyu rwekutora uye vanoba nekodhi yemakadhi ekubhadharisa nekubatsira kwe rootkits. Vanowanzotarisa zvavanoita, kuita mabasa akasiyana-siyana ane ngozi uye kuchinja mapurogiramu ako pasina kuonekwa nemunhu.
Kune rumwe rutivi, mabhota aya akawandisa emakombiyuta anotengesa kana ane utachiona. Vanokura mabhuku makuru uye maduku uye vanoita mabasa akasiyana-siyana. Muchirevo chebhodaneti, mabhoti anotumirwa kumakombiyuta uye mafoni ezvigadzirwa zvisingakwanisi kuita mabasa avo zvakanaka uye zvinotungamirirwa nevatengi. Anoshungurudza anowana simba rekutora chigadzirwa chako nekuchibata nechirwere, kadhi yakaipa kana malware iyo inorwisa mishonga yako nguva dzose. Iyo kombiyuta inokurumidza kuva chikamu chebhutaneti uye haina kushanda zvakanaka. Izvo zvinoshandiswa zvinowanzoshandiswa pakuita mabasa akawanda ematambudziko, kugovera mavairasi uye spam, nekurwisa zvigadzirwa zvitsva zvakasiyana-siyana.
Nemhaka yei rootkits uye mabhota zvinopisa zvikuru?
Chinetso chikuru chemabhodetsi uye rootkits ndechokuti vanogara vakavanzika uye vanoita mabasa avo akanyarara. Kunyange zvazvo mabhaketani haasi nguva dzose akavanzwa, rootkits haigoni kuratidza pane kombiyuta yako..Dzimwe nguva maidkits uye mabhota anoramba asina kuonekwa kusvika kana kunze kwekuti chigadzirwa chako chaparadzwa zvachose. Vanoita zvinyararire mabasa avo uye vanongotanga kuisa mamwe mapurogiramu anonyangadza pafoni yako. Sezvavanenge vakaomerwa kuti vaone, vanopikisa vanogona nyore kushandisa mabhodetti uye rootkits kuti vachinje uye vagone kuwana ruzivo rwenyu rwemunhu. Vanorwisana nemakombiyuta akawanda uye vanoita zvisikwa zvakasiyana-siyana ne bots, vanoramba vakavanzwa mumakombiyuta enyu uye mafoni. Nekombiyuta mamiriyoni ane utachiona, vanopikisa vanogona kuwedzera kukanganisa kwezvakaipa zvavo uye zvinosanganisira masangano maduku uye makuru.
Chii chatingaita kuti tizvidzivirire?
Kana uri kutsvaga nzira dzekuchengeteka dzinovimbika, unogona kutevera matanho aya uye kuderedza dambudziko remakombiyuta ako ari kutapukirwa kana kuchinjwa.
1. Chengetedza uye ushandise mapurogiramu antivirus:
Zvirongwa zveAirusiru kana software zvinofanirwa, uye unofanira kuzviisa nekukurumidza. Vanobatsira kuziva nekuchengetedza kombiyuta yako kana foni yedhiyo kurwisa mavairusi anozivikanwa uye malware. Iwe unogona kuona nyore nyore malware uye mavairasi uye unogona kuvadzivisa kuti vasakonzera zvinetso zvakakomba kwauri. Sezvo vanorwisa vachienderera mberi vachinyora mishonga yehutachiona itsva, zvinokosha kuchengetedza tsanangudzo uye zvirongwa zvehutachiona zvinoshandiswa. Iwe unofanirwawo kuisa anti-rootkit uye anti-bot mapurogiramu pafoni yako.
2. Isai moto
Unofanirwa kuisa zvivako zvekudzivirira zvinokubatsira kudzivirira mhando dzakawanda dzehutachiona uye kudzivirira maratidzi ane ngozi asati aparadza kombiyuta yako. Inogadzirisa magetsi uye inogona kuita mabasa ayo pane zvese zvinoshanda. Iva nechokwadi chokuti unochengetedza moto wako wekudzidzira moto nguva dzose.
3. Shandisa passwords zvakasimba
Unofanirwa kusarudza mapepa akadai kuitira kuti vanopikisa vasazvifungidzira chero zvingabhadhara. Shandisa mazwi akasiyana uye ubatanidza zvose nhamba uye alphabets apo uchigadzira password. Iwe unofanirwa kuchinja password kuti uchengetedze kuchengeteka kwako paIndaneti.